Ukuphupha ngesepha Discover Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Sisebenzisa isepha xa sihlamba izandla zethu okanye ishawa. Abanye abantu bakhetha ukusebenzisa ibar yesepha esebenzayo, ukucoca, ngelixa abanye bekhetha isepha engamanzi kwindawo yokuhambisa isepha.
Ubume bayo obukhethekileyo bususa ukungcola kunye neoyile kulusu lwethu, kodwa kwangaxeshanye zichaphazela ukhuseleko lwendalo. Ke ngoko, ukuba uhlamba izandla zakho rhoqo ngesepha, ubeka emngciphekweni ulusu olomileyo nolomeleleyo. Nangona kunjalo, kukho iikhrimu ezininzi kunye neemveliso zokhathalelo kwintengiso yokuthintela oku.
Ukongeza ekubalulekeni okukhulu kwesepha kubomi bethu bemihla ngemihla, inokudlala indima kwimeko eyahlukileyo ngokupheleleyo: kumaphupha ethu. Ukuba kubonakala apha njengophawu, ikakhulu ngokunxibelelene nesibakala sokuba sizithambisa ngethayi eyenziwe ngesepha. Kodwa ngamanye amaxesha sibona ibha enye yesepha kwaye asiyisebenzisi. Amaxesha ngamaxesha isepha ibonakala kuthi kwiphupha lebhabhu lesepha.
Ngayiphi na imeko, loo maphupha ayacacisa. Kodwa isepha ichazwa njani ngokuchanekileyo ephupheni?
1 Uphawu lwephupha «isepha» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isepha» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isepha» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isepha» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengakubomi bokwenyani, isepha njengophawu lwephupha nayo ingangumqondiso kucoca kuba. Nangona kunjalo, kule meko, akaceli ukuba ahlambe izandla okanye umzimba. Ephupheni, ukucocwa kuqondwa ngokomfuziselo: umntu ochaphazelekayo kufuneka aphule kunye neempembelelo ezimbi ebomini bakhe. Mhlawumbi nawe unezimo zangaphakathi ezingathandekiyo apho "kufuneka uzihlambulule."
Rhoqo, nangona kunjalo, uphawu "isepha" lukwabhekisa kubudlelwane phakathi kwabantu. Ukubona nje isepha kunokutsha Amaqhinga anenzondo kunye nokonakalisa igama Amahemuhemu bhekisa. Umntu othile uxelela izinto ngasemva kwabo ezineziphumo ezibi kubo. Uya kunyanzeliswa ukuba asombulule ukukrokra kwaye azikhusele kwabanye. Ukuba umphuphi usebenzisa isepha, uhlamba izandla, ubuso kunye nomzimba, ekugqibeleni uyaphumelela. Ubuhlobo bexesha elide busesichengeni ngenxa yokuthandana.
Nabani na ohlamba izandla zakhe ngesepha ephindaphinda ephupheni unengxaki komnye ngokoluvo ngokubanzi. isazela esibi. Iphupha linemvakalelo yokuntywila ngokunzulu kwityala lomnye umntu ngenxa yesenzo esibi. Ngokwenza njalo, woyikisa ngokungazinanzi ezinye izibophelelo ezibalulekileyo.
Uphawu lwephupha «isepha» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokombono wengqondo, isepha inokubonisa ephupheni ukuba lo mntu kuthethwa ngaye akanalo uxolo nesiqu sakhe. Mhlawumbi uziva ngokwakho ngamava athile okanye isenzo esidlulileyo kwicala lakho. ngokwengqondo emdaka. Isimboli yesepha iyakubongoza ukuba ekugqibeleni ujongane namava kakhulu. Le kuphela kwendlela yokufikelela esiphelweni kwaye ujonge kwikamva kwakhona ngaphandle kokukhathazeka.
Ukuba isepha emanzi kunye emtyibilizi iyasinda ngelixa uzama ukuhlamba ephupheni, into ebomini bokwenyani isoyikisela ukuphuma. Lo mntu kuthethwa ngaye uzama ukuphembelela izinto angenakuzichaphazela. I-subconscious yakho ifuna ukukwenza uqaphele ukungabi nathemba kwemizamo yakho.
Abanye babahlalutyi beengqondo baphinde baqonde isepha kumaphupha njengophawu lwesini. Ngokwale ngcaciso, kuthetha isidoda sendoda.
Uphawu lwephupha «isepha» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, isepha ibhekisa kwelinye imposiso kwixa elidlulileyo uqobo. Umntu ekuthethwa ngaye uyakwazi ukuyicoca le nto kwaye ayishiye ngasemva.